ပွောငျး Bitcoin သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 18/06/2021 12:04
Bitcoin သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ converter ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယနေ့အတွက် Bitcoin စျေးနှုန်း။
1 Bitcoin = 36 532.40 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ Bitcoin များ၏ငွေလဲနှုန်းအားလုံးရင်းမြစ်များမှပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားရှိပါတယ်။ အိမ် လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးကို အိမ် လဲလှယ်စျေးကွက်တွင်ပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး နှုန်းကိုသတင်းအချက်အလက်။ 1 Bitcoin 972.450786 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လာသည်။ Bitcoin ငွေလဲနှုန်းနှိမ့်ချ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ထံသို့သွားလေ၏။ အဆိုပါ Bitcoin နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း point ရဲ့ -259 ရာစေ့သောအားဖြင့် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဆန့်ကျင်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း Bitcoin သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့လ, Bitcoin 40 890.55 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ခြောက်လအကြာ, Bitcoin 23 099.83 အမေရိကန်တဒေါ်လာ များအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, Bitcoin9551.39 အမေရိကန်တဒေါ်လာ များအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ ငွေလဲနှုန်း၏ဇယားစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကျော်, Bitcoin -8.49% ဖြင့်ပြောင်းလဲ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းရန်။ 282.48% - Bitcoin လဲလှယ်နှုန်းကိုတစ်နှစ်မှာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြောင်းလဲခြင်း။
Bitcoin (BTC) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) စျေးနှုန်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇယား
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ပွောငျးခွငျး Bitcoin အမေရိကန်တဒေါ်လာ
Bitcoin (BTC) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 Bitcoin 36 532.40 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 Bitcoin 182 661.99 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 Bitcoin 365 323.98 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 Bitcoin 913 309.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 Bitcoin 1 826 619.88 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 Bitcoin3653 239.76 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 Bitcoin9133 099.41 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 Bitcoin 18 266 198.81 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ယနေ့ 365 323.98 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 10 Bitcoin ။ 25 Bitcoin အတွက်ဒီနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး converter 913 309.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ သငျသညျ 50 Bitcoin ဘို့ 1 826 619.88 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဖလှယ်နိုင်ပါတယ် ။ 100 Bitcoin အတွက်ဒီနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး converter3653 239.76 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ သငျသညျ9133 099.41 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရှိပါက, ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ 250 Bitcoin ။ သငျသညျ 500 Bitcoin ဘို့ 18 266 198.81 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကိုဝယ်လို့ရပါတယ် ။
Bitcoin (BTC) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ပွောငျး Bitcoin သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယနေ့အချိန်တွင် 18 ဇွန်လ 2021
18/06/2021 37 692.88 -994.81 ↓
17/06/2021 38 687.69 -1 379.65 ↓
15/06/2021 39 923.04 -
18 ဇွန်လ 2021, 1 Bitcoin ကုန်ကျစရိတ် 37 692.878 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 17 ဇွန်လ 2021, 1 Bitcoin = 38 687.690 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 16 ဇွန်လ 2021, 1 Bitcoin = 40 067.337 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ပြီးခဲ့သည့်လကများအတွက်အများဆုံး Bitcoin မှ အမေရိကန်တဒေါ်လာ နှုန်း 16/06/2021 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Bitcoin (BTC) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) စျေးနှုန်းသမိုင်းဇယား
Bitcoin နှင့် အမေရိကန်တဒေါ်လာ
Bitcoin ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ကုဒ် BTC. အဆိုပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးစတင် 28/04/2013.
အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ကုဒ် USD. အဆိုပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကုန်သွယ်ရေးစတင် 09/09/2020.